Sara Sjötröm oo Jerringspris ku guuleysatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sarah Sjöström oo sannadkii labaad la gudsoonsiiyey billadda Jerringpris. Foto: TT Nyhetsbyrån
Sara Sjötröm oo Jerringspris ku guuleysatay
La daabacay tisdag 26 januari 2016 kl 12.58
Sarah Sjöström ayaa ku guuleysatay billadda Radiosporten ee Jerringpris – billaddan ayaa cidda la siinayo waxaa u codeeya shacabka Sweden. Waana sannadkii labaad oo ay ku guuleysato billaddan Sara Sjöström oo ah xidig ku dheereysa tartanka dabaasha.
– Biladdan baaquliga ah sidii sannadkii hore uma cusla, waxaa laga yaabaa in aan xooga yaro xoogeystay, miyaan xoogeystay? Xaqiidii waa arrin cajiib ah, wow. Waxaan sheego ma aqaan. Waxaan u mahad celinayaa dadkii ii codeeyey oo dadaalkeyga igu tageeray. Xaqiiqdii la’aantii ma awoodeen in ciyaaraha guulahan ka gaaro, dhamaantii waa mahadsan tahiin, ayey Sara Sjöström oo ka mahad celineysay guulsha billadda.
Sarah Sjöström sannadkii 2015 waxuu u ahaa sannad guul ah. Tartanka aduunka dabaasha oo lagu qabtay Kazan dalk Ruushka ayey ka soo hoysay shan biladood oo labo aheyd dahab, sidoo kale labo rekord ayey ka dhigtay tartankas.
Waa markii labaad oo Sara Sjöström ku guuleysato billaddan ayna codka ugu badan ka hesho shacabka Sweden ee u codeeyey cidda la siinayo billadda Jerringpris.
Profilerna om Sjöströms Jerringdubbel